Bahrain: Nicholas Kristof, vavolombelona nanatri-maso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2018 15:55 GMT
Ampahany tamin'ny fitantaranay manokana ny Hetsi-panoherana Bahrain 2011 ity lahatsoratra ity.
Nicholas Kristof , mpanao matoandahatsoratra ao amin'ny New York Times izay efa in-droa nahazo ny loka Pulitzer no nitatitra ny tranga niseho tao Bahrain tao amin'ny kaontiny Twitter. Raha vao tonga tao Bahrain roa andro i Kristof dia voalaza fa maty ny mpanao fihetsiketsehana anankiroa, taorian'ny fivorian'ny olona an'arivony nitaky demokrasia tao an-kianja Pearl.
Avy eo tamin'ny 3 ora maraina tany ho any ora any Bahrain ny Alakamisy 17 Febroary, rehefa natory teo amin'ny manodidina ny fihodinan-dalana Pearl ireo mpanao fihetsiketsehana dia nisy mpitandro filaminana nanafika azy ireo tamin'ny basy, etona mandatsa-dranomaso ary niaraka tamin'ny fampiasan-kery, tsy nisy fampitandremana mialoha anefa. Nitranga ny fanafihana ny mpanao fihetsiketsehana taorian'ny fanambaran'ny Mpanjaka Hamad ao Bahrain fa nanenina izy tamin'ny fampiasana herisetra teo aloha:
Toa natao mba hisorohana tsy hisian'ny vavolombelona mahita ny herisetra ny fotoana nosafidian'ny Mpanjaka Hamad hanaovana ilay fanafihana sy ny fandrarana ireo mpanao gazety tsy hiditra ao amin'ilay Fanjakana. Ny maraina, nanomboka nandray ireo mpanao fihetsiketsehana an-jatony izay naratra noho ny daroka, bala tena izy sy ny bala fingotra ireo hopitaly tao Bahrain. Nitatitra ny toe-draharaha tany amin'ny hopitaly i Kristof:
Toa hita fa nangataka ny fanampian'ny tafika vahiny ny polisy misahana ny korontana ao Bahrain: